Home Wararka Guddiga Doorashada heer Federaal oo amaanay boobkii shalay ka dhacay Jowhar
Guddiga Doorashada heer Federaal oo amaanay boobkii shalay ka dhacay Jowhar
Waxaa shalay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ka dhacday doorashada lix kursi oo kamid noqonaya Xildhibaanada gollaha shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee federaalka Soomaaliya.
Doorashada shalay ka dhacday magaalada Jowhar ayaa qaarkood abuureen hadal heyn badan kadib markii mid kamid ah kuraasta ay ku tartameen musharax goobta ku sugnaa iyo musharax kale oo hoolka doorashada ka maqnaa.
Musharaxiinta qaarkood doorashada shalay ka dhacday magaalada Jowhar ayaa sheegay in doorashada loo diiday in ay ka qeyb galaan qaarkoodna kuraasta loo xiray xubnihii ku guuleestay doorashada.
Guddiga doorashada heer federaal ayaa qoraal ay soo saareen kusoo dhaweeyay doorashada ka dhacday shalay magaalada Jowhar, waxa ayna guddiga si gaar ah u ammaaneen in sadex dumar loo doortay Xildhibaano lixdii kursi ee shalay la doortay.
Guddiga doorashooyinka ayaana iska dhaga tiray cabashada musharaxiinta kuraasta qaar kasoo yeertay, iyo sidoo kale qaladaad ka jiray doorashadii shalay ka dhacday magaalada Jowhar.
Previous articleMaxkamadda Ciidanka Puntland oo xukuntay shabakad ka tirsan Al-shabaab.
Next articleMaleeshiyo beeleed ku dagaalay Galgaduud iyo khasaare ka dhashay
Amnesty oo ku eedeeysay dowladda Farmaajo inay hanjabaad iyo cago juglyan...
Dhaxal Suge Maxamed Bin-Salman oo ku baraarugay xaqiiq uusan fileyn –...